I-Apex Solar ingumhlinzeki wemikhiqizo ye-photovoltaic enamandla wokukhiqiza ahlanganisiwe. Imikhiqizo ye-photovoltaic yeKuigu Technology ithunyelwe emazweni angaphezu kwama-20 afana ne-United States, Germany, United Kingdom, Brazil, South Africa njalonjalo. Ukuthunyelwa okuphelele kufinyelele ku-2GW, okwenza kube ngumkhiqizo welanga okhethwayo kumakhasimende amaningi.
I-Apex Solar yethule imishini yokukhiqiza ezenzakalelayo esezingeni eliphakeme ukukhiqiza amapaneli elanga asezingeni lawo wonke amakhasimende, amandla wokukhiqiza azofinyelelwa ku-1GW ngonyaka ozayo.Kunohlelo olubanzi lwe-QC olucabanga ukuqala kuze kube sekugcineni. Zonke izinto zokusetshenziswa ezisetshenzisiwe zivela kubahlinzeki beTier 1, ziletha imikhiqizo yekhwalithi efanayo negama elithi abakhiqizi bemodyuli yelanga eChina ngentengo yokuncintisana.
I-MONO 480-505W 150cells (M12 / 210mm)
Incazelo Yomkhiqizo Uchungechunge lwe-M12 lwephaneli elanga lwenziwa ngamaseli elanga angama-210mm, nge-MBB ...
I-MONO 390-405W 120cells (M12 / 210mm)
Incazelo Yomkhiqizo Uchungechunge lwe-M12 lwephaneli elanga lwenziwa ngamaseli elanga angama-210mm, nge-MBB nohhafu ...
I-MONO 585-605W 120cells （M12 / 210mm）
Usebenzisa i-M12 (210mm) Part wafer ne-MBB, qhubeka nokwenza ngcono amandla Ukusebenza kahle kungathola ama-21% ngenhla Ngamaseli ayi-1/3-cut 110, ubuchwepheshe bamaseli angu-1/3-cut kwenza amandla aphakeme nokushisa okushisayo kwendawo
210mm 132 amaseli 660w
Usebenzisa i-M12 (210mm) wafer Part nge-MBB, qhubeka uthuthukise amandla
Ukusebenza kahle kungathola ama-21% ngaphezulu
Ngamaseli ayi-132 anqunywe ngoHhafu, ubuchwepheshe bamaseli anqunywe phakathi kwenza amandla aphakeme futhi kwehlise izinga lokushisa lezindawo ezishisayo
Izisekelo Zokukhiqiza Ezintsha ilula ...
Izisekelo Zokukhiqiza Ezintsha zakhiwe eYangzhou City, eSifundazweni saseJiangsu, eChina, zihlanganisa indawo engama-25000m2. Ulayini omusha wokukhiqiza awukhiqizi kuphela amandla amakhulu elanga ...
Uhlelo Solar Futhi EPC Instal ...
I-Solar System ne-EPC Ukufakwa Kokuqeqeshwa Ukusebenzela kangcono amakhasimende ethu, i-Apex arra ...
Kungani iPhaneli Yelanga Elinamaseli Elanga Esikwe Isigamu Lidume Kangaka product I-Apex Solar productio entsha ...